Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeBahamas Breaking » Yini Okusha e-Bahamas ngo-December
Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Culinary • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Umculo • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Shopping • Sports • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Isithombe sihlonishwa yi-The Bahamas Ministry of Tourism & Aviation
Nakuba amazinga okushisa ehla kwenye indawo, ilanga likhanya ngokugqamile eZiqhingini zaseBahamas.
Abahambi bangandizela e-Grand Bahama Island besuka e-Miami nsuku zonke ngemali ephansi engu-$267 yohambo lokuya nokubuya futhi babhukhe izindawo zokungcebeleka ngisho nezintengo eziphansi. Nikeza isipho somuntu wase-Bahamian wokuphunyuka kulesi sikhathi samaholide ngokuzijabulisa okusezingeni lomhlaba, izindawo ezihehayo namadili ongaphuthelwa weholide.
I-HERO World Challenge Ibuyela e-Albany – Umqhudelwano wegalofu okhetheke kakhulu osingathwe nguTiger Woods ubuyile kulo nyaka. I 2021 HERO World Challenge kwenzeka phakathi I-Bahamas Disemba 2-5, 2021, e-Albany's par-72 Championship Golf Course.
I-Global Superstar Doja Cat Headlines at Atlantis Paradise Island - I-Atlantis Paradise Island izokwamukela umculi oqokwe kathathu we-GRAMMY®, umbhali wengoma kanye nomdidiyeli u-Doja Cat ikhonsathi yangaphandle ekhethekile endaweni yokungcebeleka yaseRoyal Deck ebheke eParadise Beach.
I-Cove, u-Eleuthera Wenza Ukubuya Okukhulu- The Cove, Eleuthera izovulwa kabusha ngoDisemba 20, 2021. Njengoba ibekwe phakathi kwamakhova amabili esihlabathi esimhlophe, izihambeli zingalindela ukujabulela ukunethezeka kwe-Out Island kokuzola nobumfihlo.
Isizini ye-Bowl ka-2021 iqala e-Bahamas – Unyaka wesikhombisa IBahamas Bowl izodlalwa ngoDisemba 17, 2021, eThomas A. Robinson National Stadium yaseNassau. Abadlali nabazohambela umcimbi bazokwamukela isimo sezulu sosuku lwemidlalo eshisayo egcwele ilanga, isihlabathi kanye nebhola lasekolishi.
Sekela Ubuciko Bendawo Embukisweni Wohwebo Wase-Bahamian Oyiqiniso - Abadali abanekhono base-Bahamian bazokhombisa izinhlobo eziningi zemikhiqizo eyenziwe ngezandla endaweni I-Bahamian Trade Show eyiqiniso. Umcimbi wezinsuku ezimbili uzoba ngoDisemba 11-12, 2021, kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-6 ntambama e-Conference Centre e-Atlantis, eParadise Island.
Ukuqashelwa Okudume Umhlaba Wonke Kukhanya phezu kwe-Bahamas - I-Bahamas iwine ubhedu esigabeni samazwe ngamazwe "Imiklomelo kaStella", kanye "Indawo Engcono Kakhulu Yemihlangano e-Caribbean"Futhi"Indawo ehamba phambili ye-Caribbean Yegalofu” ngo-2021 Ijenali yaseCaribbean Imiklomelo Yokukhetha Abahambi.
Thola I-Ultimate Seclusion e-Over Yonder Cay - Amagama e-Boutique Hotel Awards Ngaphesheya kweCay, indawo ekhethekile ye-eco-friendly e-Exuma Cays, The Bahamas, “I-Villa Ezimele Engcono Kakhulu Emhlabeni".
NgoLwesihlanu Nights e-Anchor Bay - Njalo ngoLwesihlanu ebusuku, i-Governor's Harbour Development Association yenza a I-Fish Fry e-Anchor Bay ethekwini likaMbusi. Izinzuzo zomcimbi zisekela umgubho waminyaka yonke wokubuya ekhaya kanye namaphrojekthi ahlukahlukene omphakathi.
Ukuthola uhlu oluphelele lwamadili namaphakeji we-The Bahamas, vakashela bahamas.com/deals-packages.
Ilanga, isihlabathi kanye nokonga eFreeport - Izindawo zokungcebeleka eziseBeachfront I-Freeport, i-Grand Bahama Island inikezela ngesaphulelo esingafika ku-50%, uma ubhukha ngo-December 23, 2021. Thatha ithuba lokubaleka esiqhingini okulula kakhulu, okuthengekayo kakhulu.
Bhukha Manje futhi Ukhokhe Ngokuhamba kwesikhathi e-Atlantis -Isiqhingi sase-Atlantis Paradisengokubambisana ne-Uplift, isixazululo sezimali esinikeza abahambi ithuba lokubhukha iholide lamaphupho namuhla futhi bakhokhe ngokugcwele ngokuhamba kwesikhathi ngezitolimende ezigxilile.
Buyela ePharadesi, Thola Ubusuku Besine Mahhala - I-Ocean Club A Four Seasons Resort inika izivakashi ubusuku besine obunesizotha obukhokhelwayo njalo ngobusuku obuthathu obulandelanayo kanye nezinto zokuhamba ezizimele zesikhumulo sezindiza. Iwindi lokuvakasha manje selidlulile kuDisemba 31, 2022.
Njengoba kuneziqhingi neziqhingi ezingaphezu kuka-700 kanye nezindawo eziyiziqhingi eziyi-16 eziyingqayizivele, i-Bahamas iqhele ngamamayela angu-50 ukusuka ogwini lwaseFlorida, inikeza indlela yokuphunyuka elula ehambisa abahambi kude nosuku lwabo lwansuku zonke. Iziqhingi zase-Bahamas zinezinga lomhlaba zokudoba, ukutshuza, ukuhamba ngesikebhe, ukushayela izinyoni, kanye nemisebenzi esekelwe emvelweni, izinkulungwane zamakhilomitha amanzi omhlaba amahle kakhulu namabhishi ahlanzekile alinde imindeni, imibhangqwana kanye nezihambi. Hlola zonke iziqhingi onganikela ngazo bahamas.com noma ku Facebook, YouTube or Instagram ukubona ukuthi kungani Kungcono eBahamas.